Banyere Anyị - Rongtai itinye n'ọkwa Technology Co., Ltd.
Itinye n'ọkwa agbaze Ọkụ
Steel Shell agbaze Ọkụ
Aluminum Shell agbaze Ọkụ
Itinye n'ọkwa Heating Ọkụ
Itinye n'ọkwa Okpomọkụ Ọgwụgwọ
Itinye n'ọkwa quenching Machine
Ibe ya bụrụ & Ife ​​akpaaka
Shandong Rongtai itinye n'ọkwa Technology Co., Ltd.e guzobere 1997, bụ a mba elu-tech enterprise subordinating na ụwa-klas elu-ọgwụgwụ akụrụngwa manufacturer- Himile Group. N'ihi na ihe karịrị afọ 22, Rongtai e na-elekwasị anya na-enye mụ na oru oma MF itinye n'ọkwa kpo oku akụrụngwa.
Himile Group e guzobere na 1995, emi odude ke Gaomi City, Shandong Blue Economic Mpaghara. N'ihi na ihe karịrị afọ 20, ụlọ ọrụ mepụtara ngwa ngwa na iji nwayọọ nwayọọ na na a compound kwa afọ ibu ọnụego nke fọrọ nke nta 50%. Ugbu a, ọ nwere ihe karịrị 30 enyemaka, gụnyere otu A-ike depụtara ụlọ ọrụ (ngwaahịa koodu 002595), anọ mba elu-tech ụlọ ọrụ na ise esenidụt ụlọ ọrụ. Himile-ekpuchi ebe ndị 2,664,000㎡, mîdaha ihe karịrị 10,000 ndị mmadụ na nwere ngụkọta akụ nke 7.6 ijeri RMB. Ọ bụ idem ke ígwè n'ichepụta, offshore engineering, okporo ígwè n'ụzọ, gas, agụmakwụkwọ na ndị ọzọ ubi.
Dị ka a isi enyemaka nke Himile Group, Rongtai itinye n'ọkwa Technology aha isi obodo nke 10 nde RMB. The abụọ ụlọ mmepụta ihe na-ekpuchi a ngụkọta nke ebe 137,200㎡. E nwere 5 oge a noo na a ngụkọta nke ebe 46,000 square mita, zuru ụlọ ọrụ ma na-akwado ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ isi ngwaahịa gụnyere usoro ugboro itinye n'ọkwa na ngwá na-akwado ndị na akpaaka na ngwá, na isi na ngwaahịa ndị elu-ọgwụgwụ itinye n'ọkwa agbaze ọkụ, akpaka itinye n'ọkwa kpo oku oku, online quenching na tempering mmepụta akara, wdg, na-eje ozi na ọtụtụ elu-ọgwụgwụ ígwè n'ichepụta ụlọ ọrụ n'ụlọ na ná mba ọzọ.
Ebe ọ bụ na ya oruru, Rongtai ka agbasoghị ụzọ nke onwe ha nkà na ụzụ ọhụrụ na R & D. Ọ nwere otu ìgwè nke n'elu-notch technical talent na ụlọ ọrụ, na eguzobewo a n'ógbè-larịị laabu, a n'ógbè-larịị enterprise technology center, a ọchịchị-larịị engineering nnyocha na mmepe center. N'ịnọchite anya elu larịị nke MF itinye n'ọkwa technology n'ụlọ na mba ọzọ, na-ekere òkè idegharị nke mba ọkọlọtọ nke "National Industrial Electric Heating Equipment Standardization Technology", "Ọkara Frequency Coreless itinye n'ọkwa Ọkụ" na "voltaji Type Frequency Nchigharị Multiple Ọkara Frequency Coreless itinye n'ọkwa oku Complete Set ". The oruru nke oriri ike ụkpụrụ nēfe electric furnaces.
N'ọnọdu: Raara Onwe ka na-enye ihe kasị mma na-eri-irè mba quality MF ngwá maka Chinese ahịa, na-anọchite anya China si itinye n'ọkwa ngwá ọrụ na ụwa, na-aghọ a ụwa-klas MF ngwá emeputa.
Inwe ọhụrụ ozi ọma SITE US
Shandong Rongtai itinye n'ọkwa Technology Co., Ltd. bụ a mba elu-tech enterprise subordinating na ụwa-klas elu-ọgwụgwụ akụrụngwa manufacturer- Himile Group.
Mini Melting Furnace, Melting Furnace Copper, Induction Metal Melting Oven, Graphitization Furnace, Okpomọkụ Ọgwụgwọ itinye n'ọkwa Ọkụ, Aluminum Shell Medium Frequency Furnace,